चिकन पक्सको लागि PFS वैक्सीन लाइभ लाइफफिलिज China Manufacturer
खोप रोकिएको रोकथाम
,जैव प्रौद्योगिकी प्रकोप रोकथाम,जैव प्रौद्योगिकी बायोप्रोडक्ट्स रोकथाम
Changchun BCHT Biotechnology Co. [Jilin,China] व्यवसाय प्रकार: Manufacturer Main Mark: Asia निर्यातक: 1% - 10% Certs: GMP विवरण: खोप रोकिएको रोकथाम,जैव प्रौद्योगिकी प्रकोप रोकथाम,जैव प्रौद्योगिकी बायोप्रोडक्ट्स रोकथाम
Home > उत्पादनहरू > Varicella Vaccine (Live) > अन्तिम बल्क > चिकन पक्सको लागि PFS वैक्सीन लाइभ लाइफफिलिज
 चिकन पक्सको लागि PFS वैक्सीन लाइभ लाइफफिलिज
रोगीको रक्षा गर्न के गर्न सकिन्छ बिना प्रतिरक्षा को सबूत जो भाइरला को सामने उजागर भएको छ र कडा रोग र जटिलताहरु को लागि उच्च जोखिम मा छ?
यी रोगीहरूले भाइरला जोस्टर प्रतिरक्षा ग्लोबिनिन (VZIG) प्राप्त गर्नुपर्दछ। VZIG क्लिनिकल वेरिकाला रोगलाई परिमार्जन गर्न वा रोक्न सक्दछ। 2006 मा, एक अनुसन्धान VZIG उत्पादन, VariZIG, एकमात्र अधिकृत अमेरिका वितरक, FFF उद्यम देखि उपलब्ध भयो। VZIG को प्रयोग मा विवरण 2007 varicella ACIP बयान (एमएमडब्ल्यूआर 2007; 56 [आरआर -4]:29 -32) मा पाइन्छ। 2011 मा, खाद्य र औषधि प्रशासनले एक्सपोजर पछिको अवधि विस्तार गर्यो जसमा VZIG4दिन देखि 10 दिन सम्म प्रयोग हुन सक्छ। यस परिवर्तनमा विवरण MMWR (MMWR 2012; 61: 212) मा पाउन सकिन्छ।
यदि तपाइँ चिकनप्याक्स वा जोस्टर भाइरसमा उजागर भए 1 बर्ष भन्दा कम उमेरको बच्चालाई के दिनुहुन्छ?
भाइरला भिषाको लागि न्यूनतम उमेर 12 महिना हो। 12 महिना भन्दा कम उमेरका बच्चाहरु लाई पछि एक्सपोजर प्रोफिलक्सिस को लागी टीका लागि सिफारिस गरिएको छैन। सीडीसी सिफारिस गर्दछ कि एक स्वस्थ शिशु (जो कि, immunosuppressed छैन, यसैले एक VZIG उम्मेदवार), VZV देखि संपर्क पछि कुनै विशिष्ट उपचार वा टीकाकरण प्राप्त गर्नु हुँदैन। यदि चिकेनपक्स हुन्छ भने बच्चा एसिकोलोभेरसँग व्यवहार गर्न सकिन्छ। Immunosuppressed बच्चाहरु VZIG प्राप्त गर्नुपर्छ।
सिफारिश गरिएका ट्यागहरू: खोप रोकिएको रोकथाम , जैव प्रौद्योगिकी प्रकोप रोकथाम , जैव प्रौद्योगिकी बायोप्रोडक्ट्स रोकथाम , Varicella देखि व्यक्ति को रोकथाम , अन्तिम थोक औषधि रोकथाम , उत्पादन को वैक्सीन , चिकेन पोक्स वे vaccination रोकथाम , टीकाकरण अर्ब उत्पादन रोकथाम